Wasiir Goodax iyo wafdi uu hoggaanimayo oo saakay ku wajahan Gobolka Gedo. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR JUBALAND Wasiir Goodax iyo wafdi uu hoggaanimayo oo saakay ku wajahan Gobolka Gedo.
Wasiir Goodax iyo wafdi uu hoggaanimayo oo saakay ku wajahan Gobolka Gedo.
Wafdi uu hoggaaminayo sii hayaha xilka Wasiirka Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta sare ee Soomaaliya, Cabdulaahi Goodax Barre ayaa lagu wadaa inuu gaaro Gobolka Gedo, gaar ahaan Magaalooyinka Garbahaarreey,Luuq iyo Baladxaawo.
Sii hayaha xilka Wasiirka waxbarashada Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre iyo wafdigiisa ayaa waxay safarkooda kusoo gaba-gabeyn doonaan Magaalada Balad-xaawo oo ay ka dhagax dhigi doonaan gooba kale oo lagu xoojinayo waxbarashada Gobolka Gedo.
Previous articleSii haya xilka Ra’iisul wasaaraha ayaa daah furay Musawac hagaya Maraakiibta Dekadda Muqdisho.[Sawirro]
Next articleQaban qaabadii ugu dambeysay iyo shirka Dhuusa-marreeb.